सनम हत्याकाण्डः १७ जना पक्राउ, ३८ जनाको सम्पत्ती रोक्का, को–को पक्राउ परे ? (नामसहित) « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
सनम हत्याकाण्डः १७ जना पक्राउ, ३८ जनाको सम्पत्ती रोक्का, को–को पक्राउ परे ? (नामसहित)
वैशाख ३, विराटनगर । ३३ केजी सुन काण्डमा संलग्न भनिएका सनम शाक्यको हत्या आंशकामा पूर्वी नेपालका केही सुन व्यपारीसहित ३८ जना व्यक्ति अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।सनमको हत्या आंशकामा तानिएकाहरुको सबै सम्पत्ती रोक्का गरी अनुसन्धान थालिएको हो । हत्या अनुसन्धान गर्न प्रहरीले हालसम्म १७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । अनुसन्धान तानिएका २१ जना भने फरार छन् ।
उर्लाबारी मोरङ घर भएका शाक्यको हत्यापछि खुलेको ३३ किलो सुन काण्डमा प्रहरीकै संलग्नता भएको आशंकामा गृहमन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
प्रहरीले चैत २६ गते अनुसन्धानका लागि ३८ जनाको सम्पूर्ण कारोबार रोक्का गर्न अदालतसँग अनुमति मागेको थियोे । अदालतले सोही दिन नै बैंक खाता, जग्गालगायत सबै सम्पती रोक्का गर्न अनुमति दिएको थियो ।
को–को पक्राउ परे रु क–कसको रोकियो सम्पत्ती
गत चैत २६ गते मोरङबाट पक्राउ परेका १७ जनाविरुद्ध अनुसन्धानकालागि म्याद थप गरिएको छ । त्यसबाहेकका अन्य २१ जनामाथि प्रहरीले सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
प्रहरीको फरार सूचीमा ३३ किलो सुन आयात र सनन शाक्य हत्या प्रकरणमा नाइके भनिएका चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ पनि छन् । गोरेका केही आफन्त पनि प्रहरीको खोजी सूचीमा परेका छन् ।
सनमको हत्या आंशकामा खोजी सूचीमा रहेका चुडामणि उप्रेती ९गोरे०, रमेश उप्रेती, नर्वदा खरेल उप्रेती ९निरु०, मोहनकुमार अग्रवाल ९एमके०, रक्षा भण्डारी, प्रयास पराजुली, रोहित आचार्य, कृष्ण बस्नेत, मोहमद उस्ताम मिया ९रुस्तम०, भविन राई ९तामाङ०, कमल कार्की, सन्दिप खड्का, चेतन भण्डारी, सुनिल अग्रवाल, प्रमोद श्रेष्ठ, डोलेन्द्रप्रसाद खरेल, दावा शेर्पा, भोजराज भण्डारी, दुर्गा खरेल ९उप्रेती०, भीमकुमारी खरेल, सुरेन्द्र गौतमको सम्पूर्ण कारोबार रोक्न अदालतले अनुमति दिएको हो । उनीहरु सबै धरान, इटहरी, विराटनगर र झापा निवासी हुन ।